Moher को जादुई चट्टानहरु | यात्रा समाचार
मोहरको जादुई क्लिफ्स
मारिएला क्यारिल | | आयरल्याण्ड, के हेर्ने
को मोहरको चट्टान तिनीहरू आयरल्यान्डका पर्यटक आश्चर्य मध्ये एक हुन् र हो, तिनीहरू जादुई छन्। समुद्र र आकाश संग यसको सामना मा पृथ्वी को अचानक कटौती अविश्वसनीय छ। के तपाईलाई व्यक्तिगत रूपमा चिन्नुहुन्छ? हैन? चिसो र बतासले तपाईंलाई डराउँदैन भने पनि उनीहरू एक धेरै राम्रो गन्तव्य हुन सक्छन्।
आयरल्याण्ड यो धेरै टाढा छैन त्यसैले यदि तपाईंलाई यहाँ विचार मनपर्दछ भने हामी तपाईंलाई चट्टानहरूको बारेमा जानकारी दिन्छौं र कसरी गर्ने भनेर पर्यटक भ्रमण तिनीहरू मध्ये सबै भन्दा राम्रो हराइरहेको बिना। पढ्न यात्रा गर्न!
1 महेरको चट्टानहरु
2 मोफरको क्लिफ्स भ्रमण गर्नुहोस्
तिनीहरू बुर्रेनको चर्चित क्षेत्रमा छन्, काउन्टी क्लेयरमा, आयरल्याण्डको गणतन्त्र। तिनीहरू करिब 300०० मिलियन वर्ष पहिले गठन गरिएको थियो र प्राय: चूनढुंगा हो, यद्यपि सबै भन्दा पुरानो चट्टानहरू आधारमा अवस्थित छन्।
चट्टानहरु मा चट्टानहरु भन्दा बढी बाँच्न Thousand० हजार चराहरू, २० विभिन्न किसिमका प्रजातीहरू, र उनीहरूको खुट्टामा समुद्रमा, त्यहाँ डल्फिन, शार्क र समुद्री सिंहहरू छन्। तिनीहरू लगभग १ kilometers किलोमिटरको यात्रा गर्छन् र उनीहरू पुग्ने सब भन्दा उच्च बिन्दुमा १० मिटर अग्लो, O'Brien टावर मा। अर्को छेउमा तिनीहरू १२० मिटर अग्लो छन्, एक बिन्दुमा हागको हेडको रूपमा चिनिन्छ।
ओ ब्रायन टावरको माथिबाट तपाईं एरन टापुहरू, बाह्र पाइन पर्वत पर्वतमालाहरू वा गाल्वे बे देख्न सक्नुहुन्छ, र यसको भव्यता र यसको सुन्दर दृश्यहरूका लागि यो हो प्रति वर्ष एक मिलियन भन्दा बढी पर्यटक उनीहरूको भ्रमण गर्छन्। तिनीहरू मध्ये एक बन्नुहोस्!
चट्टानहरु को हिस्सा हो जियोपार्क बुर्रेन र क्लिफ्स ऑफ मोहरबाट र यो एक महत्त्वपूर्ण बिन्दु हो जुन आयरल्यान्डले प्रस्ताव गरेको सबैभन्दा लोकप्रिय र सुन्दर पर्यटन सडकहरू हो, वाइल्ड एट्लान्टिक वे।
मोफरको क्लिफ्स भ्रमण गर्नुहोस्
चट्टानहरू सधैं मानिसहरूले प्राय: भेट्न आएका थिए, तर s ० को दशकमा सरकारले यसलाई अझ गम्भीरतासाथ लिन र भ्रमणहरू व्यवस्थित गर्न थाल्यो। यस कारणले, र प्राकृतिक पर्यटनको अवधारणाको साथ, मानव संरचना बिना विश्व र हाम्रो अनुभव, एक आधुनिक बीच हस्तक्षेप गर्दछ आगन्तुक केन्द्र पहाडको एक छेउमा, उही उचालहरूमा पुग्नु अघि।
कामहरू १ years बर्ष लाग्यो र ढोका फेब्रुअरी २०० 17 मा खोलिएको थियो। चट्टानहरूको अन्वेषण गर्न बाहिर जानु अघि यस ठाउँको भ्रमण गर्नु उत्तम हुन्छ किनभने यससँग ठाउँ, वनस्पति, जीवजन्तु र इतिहासको भूगोलको रोचक प्रदर्शन। त्यहाँ विशाल मल्टिमेडिया स्क्रीनहरू, किनारका चराको आँखा दृश्यहरू, र गुफाहरूको भिडियोहरू जुन तपाईंले कहिल्यै भ्रमण गर्नुहुने छैन किनभने तिनीहरू गुफाको फेदमा पानीमुनि छन्।
यस साइटमा पुग्न आसपासका सबै शहरहरू र शहरहरूबाट सजिलो छ। गाल्वे, किन्वारा, लाइमरिक, डूलिन, एनिस्ट्यामोन, एनिस वा लिस्डुनवर्ना बाट तपाईं बस इरान राज्य लाइन मा एक बस लिन सक्नुहुन्छ। त्यहाँ प्रति दिन धेरै सेवाहरू छन् र यदि छैन भने त्यहाँ सँधै निजी बसहरू हुन्छन्। धेरै मानिसहरू Doolin मा बस्छन्, चट्टानहरूमा यसको सहज पहुँचको लागि, यो १० मिनेट ड्राइभ हो, तर यसको पुरानो आयरिश संस्कृति र अविस्मरणीय परिदृश्यको लागि पनि।
तपाईंले कहिले मोहरको क्लिफ्स भ्रमण गर्नुपर्छ? खैर, तिनीहरू आयरल्यान्ड मा सबै भन्दा राम्रो आकर्षण को एक हो सब भन्दा रमाईलो स्टेशनहरु मा त्यहाँ धेरै मानिसहरू छन्। यसैले मैले भने कि यदि चिसो वा बतासले तपाईंलाई डराउँदैन भने तपाईं आफैलाई जाडोमा पनि उनीहरूलाई भेट्न प्रोत्साहित गर्न सक्नुहुन्छ।
दुई ठूला शहरहरू डब्लिन वा गाल्वेबाट यात्राहरू, (डब्लिन तीन घण्टा टाढा छ र गाल्वे 90 ० मिनेट टाढा छ), बिहान ११ देखि साँझ 11 बजेको बीचमा आइपुग्छ ताकि त्यो अवधि उल्लेखनीय जटिल हो। यदि तपाईं आफैंमा जानुभयो भने, यो बिहान सबेरै वा राती अबेर जानु भन्दा उत्तम छ। सूर्यास्त महान छ!
थोरै पर्यटकहरू पहाडहरूको सम्पूर्ण लम्बाई यात्रा गर्छन् र केन्द्रको वरिपरि रहन्छन्, जुन ओ ओ ब्रायन टावरको नजिक र पर्खालको छेउमा छ। यदि तपाईं भ्रमणको हिस्साको रूपमा जानुहुन्न भने तपाईंसँग धेरै समय हुन्छ त्यसैले तपाईं बढि हिंड्न सक्नुहुनेछ, जुन आदर्श हो किनभने तपाईं अधिक एक्लो रहनुहुन्छ। थप रूपमा, तपाईले साइन अप गर्न सक्नुहुनेछ फेरी सवारी यसको आधार द्वारा वा मा तटीय ट्रेल चट्टानहरू माथि १२ किलोमिटर।
तटीय ट्रेल डूलिनबाट सुरु हुन्छ र ह्यागको टाउकोमा पुग्छ उत्तम दृश्यहरू: चट्टानहरू, स्काईहरू, झरनाहरू, जताततै झाडीहरू, कारहरू छैनन्। तपाई आफैले गर्न सक्नुहुनेछ वा गाईडको साथ साइन अप गर्न सक्नुहुनेछ। यस सम्बन्धमा त्यहाँ प्याट स्वीनी नामको एक स्थानीय किसान छ जो हरेक बिहान १० बिहान हिंड्न आयोजना गर्दछन्। ती तीन घण्टाको हाईकहरू र धेरै रोचक छन्।
म तिमीलाई सम्झाउँछु त्यहाँ चट्टानहरूमा सुत्न कतै पनि छैन र त्यो नजिकको शहर डूलिन हो जहाँ आवास प्रस्ताव फरक छ, जबकि यो बेड र ब्रेकफास्टमा केहि भन्दा बढी केन्द्रित छ। स्पष्ट रूपमा त्यहाँ केहि विलासी होटलहरू अविस्मरणीय दृश्यहरू छन्।
यदि तपाइँ जाडोमा जानुहुन्छ भने तपाईंले बन्डल गर्नुपर्दछ तर वास्तविकता यो हो कि यो तट हो किनकी तपाईले जहिले पनि कोट लगाउनु पर्छ किनभने मौसम यहाँ धेरै छिटो परिवर्तन हुन्छ। कहिले काँही शावरहरू पनि सामान्य र स्पष्ट हुन्छन्, आराम नहुने जुत्ता लगाउनुहोस् जुन चिप्लँदैन। यदि तपाईं भिजिटर सेन्टरको नजिक नै बस्नुहुन्छ भने तपाईं यसको क्याफेटेरिया र यसको बाथरूमको मजा लिन सक्नुहुनेछ तर यदि तपाईं आफैंमा हिंड्नुहुन्छ भने, तपाईंलाई आफुसँग चाहिएको चीजहरू राख्नुहोस्।
त्यहाँ एउटा काठको बार छ जुन सार्वजनिक क्षेत्रहरू निजी फार्मबाट अलग गर्दछ तर तपाईं यसलाई बाइपास गर्न र मार्ग अनुसरण गर्न सक्नुहुनेछ, जबकि म तपाईंलाई चेतावनी दिन्छु कि सडक अब यति राम्ररी संरक्षित छैन। र अन्तमा, के तपाईंलाई थाहा छ? यहाँ विवाह गर्ने मानिसहरु छन्? ठीक छ, डूलिनमा, समुद्रको दृश्यको साथ एक राम्रो, प्यारो घरमा, तर पछि दम्पतीहरू चट्टानहरूमा जान्छन् र माथिका मानिसहरू जत्तिकै उत्कृष्ट चित्रहरू लिन्छन्।
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » Getaways यूरोप » आयरल्याण्ड » मोहरको जादुई क्लिफ्स
बोइमोर्टोमा प्रकाशको उत्सव
इन्स्टाग्राममा सबैभन्दा प्रसिद्ध स्पेनिश संग्रहालयहरू